Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 23
Inona avy ireo hevi-dehibe tsy mitovy amin'ny tontolo ara-panahy? Ireo teny ireo dia matetika ampiasaina amin'ny boky sy ny gazetiboky mifandraika amin'ireo lohahevitra ireo, ary io fampiasana io dia mety hampitony ny sain'ny mpamaky.
Ny "tontolo astral" sy ny "tontolo ara-panahy" dia tsy teny manonofy. Tsy azon'ireo zatra mahalala ilay foto-kevitra izy ireo. Ny tontolon'ny astral dia tontolo fisaintsainana. Ao anatin'izany no hita taratra ny tontolo ara-batana sy ny zava-drehetra amin'ny vatana, ary ao anatin'ny astral dia hita taratra ihany koa ny eritreritra ara-tsaina, ary, amin'ny alàlan'ny tontolon'ny saina, ny hevitry ny tontolo ara-panahy. Ny tontolo ara-panahy no sehatra ahitana ny zavatra rehetra misy azy, tsy misy fitaka azo ampiharina amin'ireo olona izay miaina ao anatiny. Ny tontolo ara-panahy no faritra izay hidirany rehefa tsy hiditra izy, tsy mahita fifangaroana akory, fa mahalala sy mahalala. Ny mampiavaka ny tontolo roa dia ny faniriana sy fahalalana. Ny faniriana no hery mpanapaka eo amin'ny tontolon'ny astral. Ny fahalalana no foto-kevitra fanjakazakan'ny tontolo ara-panahy. Mipetraka any amin'ny tontolon'ny astraly ny tantely rehefa mivelona amin'ny tontolo ara-batana ny biby. Izy ireo dia voataonan'ny faniriana. Miaina ny tontolo ara-panahy ny zavaboary hafa ary manaita ny fahalalana izy ireo. Raha misy olona misafotofoto ary tsy fantatra ny amin'ny zavatra tsy tokony hiheverany azy fa "ara-panahy", na dia mety ho aretin-tsaina aza izy. Ny olona iray izay miditra amin'ny tontolon'ny fahalalana ara-panahy dia tsy ao an-tsaina momba izany. Tsy faniriana ho tonga fotsiny izy, na tsy vinavinaina, na hino, na hieritreretana akory fa hainy. Raha fantany ny tontolo ara-panahy dia fahalalana miaraka aminy izany fa tsy faminaniana. Ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny astral sy ny tontolo ara-panahy dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny faniriana sy ny fahalalana.
Moa ve ny taova tsirairay ao amin'ny vatana dia vondron'olona manan-tsaina na miasa toy izao ny asany?
Tsy misy taova ao amin'ny vatana fa maranitra ny taova rehetra. Ny firafitra organika tsirairay eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy mahatsiaro tena raha toa ka misy asa miasa. Raha tsy nahatsiaro ny fiasa nataony izy dia tsy afaka nanatanteraka izany. Saingy ny taova iray dia tsy manan-tsaina raha ny fahiratan-tsaina dia midika fa olona manana saina. Amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina dia midika hoe olona mety ho avo kokoa isika, fa tsy ambany, fa tsy ny toetran'ny olona. Tsy manan-tsaina ny taova ao anaty vatana, fa miasa eo ambany fitarihan'ny saina izy ireo. Ny taova tsirairay ao amin'ny vatana dia tantanan'ny orina iray izay mahalala ny fiasan'ny taova manokana. Amin'ny alàlan'io fiasan-tsaina io no mahatonga ny taova sy ny molekiola ary atom izay mandrafitra azy, mandray anjara amin'ny asan'ny taova. Ny atiny tsirairay manakaiky ny molekiola dia fehezin'ny fahalalahan'ny molekiola. Ny molekiola tsirairay miditra ao amin'ny fandrafetana sela dia fehezin'ny hery mitaona ny sela. Ny sela tsirairay mandrafitra ny firafitry ny taova dia tarihin'ny fikambanam-batana voajanahary ao amin'ny taova, ary ny taova tsirairay ho toy ny ampahany amin'ny fikambanana ara-batana dia fehezin'ny fitsipika mifandrindra tsara izay mifehy ny fandaminana ny vatana. Ny atom, molekiola, sela, taova dia samy mahatsiaro ny asany manokana. Saingy tsy misy na dia iray aza azo lazaina fa manan-tsaina na dia manao ny asany amin'ny sehatra samy hafa ataony amina mekanika marina.
Raha aseho ao an-tsaina ny taova tsirairay na ny ampahany amin'ny vatana dia inona no mahatonga ny olona iray tsy dia hahavery ny fampiasana ny vatany rehefa very ny fampiasany ny sainy?
Manana saina fito ny saina, fa ny vatana kosa manana taova lehibe kokoa. Noho izany, tsy ny taova tsirairay dia afaka misolo tena na asehon'ny asan'ny saina iray manokana. Mety ho zaraina ho kilasy maro ny taova ao amin'ny vatana. Ny fizarana voalohany dia azo atao amin'ny fanavahana ireo taova izay, amin'ny andraikiny voalohany ny fikarakarana sy ny fiarovana ny vatana. Anisany amin'ireto aloha no ireo taova izay miditra amin'ny fandevonan-kanina sy ny assimilie. Ireo taova ireo, toy ny kankana, aty, voa ary spleen, dia ao amin'ny faritra misy ny kibo amin'ny vatana. Manaraka eo ireo izay eo amin'ny laviby thoracic, ny fo sy ny havokavony, izay misy ifandraisany amin'ny oxygenation sy ny fanadiovana ny ra. Ireo taova ireo dia mihetsika an-tsitrapo ary tsy voafehy ny saina. Anisan'ireo taova mifandray amin'ny saina indrindra ny vatana pituitary sy ny glandre pineale ary ny taova anatiny hafa ao amin'ny ati-doha. Ny olona very tsy mampiasa ny sainy dia, raha ny zava-misy, dia hiseho mandritra ny fisavana ka misy fiantraikany amin'ireny taova sasany ireny. Ny tsy fahampiana dia mety noho ny antony iray na maro. Indraindray ihany ny antony eo noho eo dia ara-batana, na mety noho ny tsy fahasalamana ara-tsaina sasany, na ny hadalàna dia mety noho ny fisian'ny saina nandao tanteraka ary nandao ny olona iray. Ny tsy fahampiana dia mety ho vokatry ny aretina sasany, toy ny aretina iray amin'ireo taova ao anaty atidoha, na amin'ny toe-javatra tsy mahazatra na fahaverezan'ny kelin-tiroida. Raha misy taova izay mifandray amin'ny saina, na amin'ny alàlan'ny saina miasa ny vatana vatana, dia very na tsy mihetsika amin'ny fihetsik'izy ireo, ny saina dia tsy afaka mihetsika mivantana na amin'ny vatana ara-batana, na dia mifandraika amin'izany aza . Ny saina dia toy ny mpanao bisikileta iray izay very ny dian-tsosony ny milina, ary na eo amboniny aza dia tsy vitany ny nampandeha azy. Na koa ny saina dia azo ampitovina amin'ny mpitaingina soavaly tamin'ny soavaly, fa ny tanany sy ny tongony mifatotra ary ny vavany no mivatana ka tsy mahavita mitarika an'io biby io izy. Noho ny fitiavam-pitiavana na ny fahaverezan'ny taova iray izay ampiasan'ny saina na anaovana ny vatana, dia mety mifandray amin'ny vatana ny saina fa tsy afaka mitarika azy.